Kenya oo Sanad kadib sheegtay Askartii looga dilay Degaanka Ceel-cadde
Sida uu Qoray Wargeeyska the star ee kasoo baxa Dalka Kenya Xusuustii u Horreysay ayaa loo qabtay Askartii Ciidamadda Kenya uga Dhimatay Weerarkii Sanad ka hor ka dhacay Deekaanka Ceel Cadde oo Fariisin muhiim ah u haa ciidamadda Kenya ee Soomalia ku sugan.
Ka sokoow Askartii iyo Sarakiishii military ee ka Soo qeyb gashay Xusuustii loo sameyay Ciidamadii dhintay waxaa kasoo qeyb galay 400 oo Qooys oo isugu jira Carruur, iyo Dumarkii ay ka dhinteen Ciidamadii la laayay.
Dowladda Kenya ayaa waxaa lagu eedeeyaa in aysan ixtiraam Siinin Ciidamadda Military-ga Gaar aahaan kuwii ku dhintay Weerarkii Ceel Cadde, Wadamadda Reer Galbeedkuna waxaa ay sheegeen in loobaahanyahy in Lagu dhawaaqo Maalin Boroordiiq Qaran ah.
Dadkii Kasoo qeyb galay Xusuustii Ciidamadda Kenya loo sameeyay ayaa Qofkasta oo kamid waxaa uu Hadalkiisa kusoo Gaban gabeenayay Su’ aasha La Xirirta Tirtadda Ciidamadda ee Kenya looga Dilay Weerarkii Ceel Cadde.
Qaarkamid Askartii kabadbaday Weerakii 15 January 2016 Ceel Cadde kadhay oo Qudbado Halkaasi ka jeediyay ayaa waxaaa ay Si yaabo kala duwan.
Midkamid ah Badbaadayaashii goobta ka hadlay ayaa waxaa uu sheegya in 13 askari ay wateen Shabaabkii Weerarka Soo qaaday 173 kalena ay Halkaasi ku dhinteen.